ငါးကွီးဆီ အကွောငျးသိကောငျးစရာမြား | Opinion Leaders
Omega 3ဆိုတာလူ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့အဆီဓာတျ(essential fatty acid)တမြိုးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အဆီတှထေဲမှာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ကောငျးကြိုးပွုတဲ့ အဆီမြိုးဆိုရငျလညျး မမှားဘူး။
omega 3ကို ငါးရဲ့အဆီ(fish oil)ထဲမှာ အဓိကတှရေ့တယျ။ဒီနရောမှာ တခကျြပွောခငျြတာက ငါးကွီးဆီ(cod-liver oil)နဲ့ ငါးအဆီ(fish oil)မတူညီပါဘူး။ ငါးကွီးဆီ(cod-liver oil)ဆိုတာ ငါးရဲ့အသညျးကနေ ထုတျယူထားတာပါ။
ငါးကွီးဆီမှာ omega 3အပွငျ ဗီတာမငျ အနေဲ့ဗီတာမငျဒီဓာတျတှလေညျးပါဝငျသေးတယျ။ သို့သျော ငါးကွီးဆီ(cod-liver oil)ရဲ့ အိုမီဂါသရီးပါဝငျမှုက ငါးအဆီ(fish oil)ထကျ ၂ဆလောကျ ပိုမိုနညျးပါးတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ အိုမီဂါ သရီးကွှယျဝတဲ့ အစားအစာကို ရှေးခယျြခငျြတယျဆိုရငျ ငါးအဆီကို အဓိကစားပေးသငျ့ပါတယျ။
Omega 3လို့ ဘာကွောငျ့ ချေါကွလဲ
ဓာတုဖှဲ့စညျးပုံအရ omega 3ဆိုတာ long-chain fatty acid မြိုးဖွဈပါတယျ။ long-chainဆိုတဲ့သဘောက ကာဗှနျအကျတမျ အနညျးဆုံး ၁၈လုံးပါဝငျတဲ့ မျောလီကြုးတဈခုကို ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။
ကာဗှနျအကျတမျ ၃လုံးမွောကျမှာ အဆကျနှဈခုပါလို့ omega 3လို့ အလှယျအမညျပေးထားပါတယျ။ အလားတူ ကာဗှနျအကျတမျ ၆လုံးမွောကျမှာ အဆကျနှဈခုရှိရငျ omega 6လို့ ချေါပါမယျ။ ၉လုံးမွောကျမှာ ရှိရငျ omega 9ဖွဈပါတယျ။
Fatty acidဆိုတာ ဘာလဲ
ဖကျတီးအကျဆဈဆိုတာ အဆီဓာတျတမြိုးဖွဈပါတယျ။ fatty acidထဲမှာ ပွညျ့ဝဆီ(saturated fatty acid)နဲ့ မပွညျ့ဝဆီ(unsaturated fatty acid)ဆိုပွီး ခှဲခွားထားတယျ။ ပွညျ့ဝဆီ(ဘဲသား၊အမဲသား၊ဝကျသား)ဆိုတာ မကောငျးတဲ့အဆီမြိုးဖွဈတယျ။
သာမနျအခနျးအပူခြိနျမှာ ခဲနတေဲ့အဆီမြိုးဖွဈပွီး သှေးကွောနံရံမှာ ခဲပွီးပိတျဆို့စတောကွောငျ့ ကောငျးကြိုးမပွုဘူး။ လူ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ကောငျးကြိုးပွုတာက မပွညျ့ဝဆီတှဖွေဈပါတယျ။
မပွညျ့ဝဆီတှထေဲမှာ monounsaturated fatty acidနဲ့ polyunsaturated fatty acidဆိုပွီး ခှဲထားသေးတယျ။ monounsaturated (အုနျးဆီ၊သံလှငျဆီ)ဆိုတာ မပွညျ့တပွညျ့ အဆီမြိုးကို ချေါပါတယျ။
ဒီလိုအဆီမြိုးဟာ အခနျးအပူခြိနျမှာ အရညျဖွဈပမေယျ့ အအေးခံရငျ ခဲသှားတတျပါတယျ။ polyunsaturated fatဆိုတာ အခနျးအပူခြိနျတငျမက အအေးခံရငျလညျး အရညျအဖွဈက ပွောငျးလဲတာမြိုး မရှိပါဘူး။
omega 3ဆိုတာ polyunsaturated fatမြိုး ဖွဈပါတယျ။ အဆီထဲမှာ လူတှနေဲ့ အသငျ့တျောဆုံးအဆီတမြိုးဖွဈပါတယျ။
အိုမီဂါ သရီးမှာ ALA(alpha linolenic acid)၊EPA(Eicosapentaenoic acid)နဲ့ DHA(Docosahexaenoic acid)ဆိုပွီး ၃မြိုး ရှိတယျ။ အခွခေံကတြဲ့ အမြိုးအစားက ALAဖွဈပါတယျ။
ALAဆိုတာ အပငျ၊အစအေ့ဆံတှကေရတဲ့ အဆီမြိုးဖွဈတယျ။ရောငျရမျးခွငျးကို အဓိကသကျသာစမေယျ။ ဆေးပညာမှာ ALAထကျစာရငျ EPAနဲ့ DHAက ပိုမိုအသုံးဝငျတာ တှရေ့တယျ။
နှလုံးရောဂါ ဖွဈပှားမှုကို အဓိကကာကှယျပေးပွီးမကောငျးတဲ့အဆီဓာတျကို လြှော့နညျးစနေိုငျတယျ။ ထို့ပွငျ DHA က ကလေးဦးနှောကျဉာဏျရညျဖှံ့ဖွိုးခွငျးကိုအားပေးပါတယျ။
EPAနဲ့DHAကို ငါးအမြိုးမြိုး(ဆျောလမှနျ၊ဆာဒငျး၊တူနာ)၊ပငျလယျစာ၊ပငျလယျရမှေျော စတာတှမှော အဓိကတှရှေိ့ရတယျ။
OMEGA3fatty acids က ဘာတှေ လုပျပေးလဲ?
၁။ Cholesterol ကဆြငျးခွငျး
OMEGA3fatty acidsဟာ ခန်ဓာကိုယျမှာ မလိုအပျတဲ့ ပွညျ့ဝဆီတှကေို နညျးစပွေီး ကောငျးမှနျတဲ့ HDL Cholesterol တှကေို တကျစပေါတယျ
၂။ နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ကာကှယျခွငျး
OMEGA3fatty acidsဟာ သှေးကွောတှအေဆီဖုံးတာ ကာကှယျပေးလို့ နှလုံးသှေးကွောသာမက အခွား သှေးကွောကဉျြးရောဂါတှကေိုပါ ကာကှယျပါတယျ
၃။ သှေးတိုး ကာကှယျခွငျး
လလေ့ာခကျြတှအေရတော့ OMEGA3fatty acids တဈနေ့ ၃ဂရမျ သောကျပေးရငျ သှေးတိုးကာကှယျပါသတဲ့။ ဒါပမေယျ့ ၃ဂရမျဆိုတာ မြားတော့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပါ။
၄။ အဆဈယောငျ လေးဘကျနာ Rheumatoid arthritis
ျ့ OMEGA3fatty acidsဟာ အဆဈယောငျတာကွောငျ့ နာကငျြမှုကို သကျသာလြော့နညျးစတေယျ။ အဆဈပကျြစီးမှုကိုတော့ မကာကှယျပေးနိုငျပါဘူး။
OMEGA3fatty acidsဟာ ကယျလျဆီယမျဓာတျကို မွငျ့တကျလာစလေို့ အရိုးသိပျသညျးဆကိုလညျး မွငျ့တကျလာစတေယျလို့ လလေ့ာတှရှေိ့ထားပါတယျ။
အရှယျမတိုငျခငျ မှတျဉာဏျ ကဆြငျးခွငျးကို လလေ့ာတဲ့အခါ OMEGA3fatty acids မှီဝဲမှု နညျးပါးခွငျးကွောငျ့ လို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မှတျဉာဏျ ကောငျးမှနျအောငျ ငါးစားကွရအောငျလား။
တယောကျနဲ့ တယောကျ နစေ့ဉျလိုအပျတဲ့ပမာဏ မတူညီကွပါဘူး။ အသကျ ၅-၁၄နှဈအတှငျး 500mg၊အသကျ ၄၀အောကျ ဖွဈရငျ 1000mg၊အသကျ ၄၀အထကျဖွဈရငျ 2000mgအသီးသီးလိုအပျပါတယျ။
နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ နစေ့ဉျ အိုမီဂါ သရီး ပမာဏ 1 g စားပေးသငျ့တယျ။ တပတျ အနညျးဆုံး 2g စားပေးနိုငျရငျ လဖွေတျနိုငျခကြေို ၅၀ရာခိုငျနှုနျးထိ လြှော့ခပြေးတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဖွညျ့စှကျဆေးထကျ
အစားအသောကျထဲမှာ ပါနနေိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ယဘေုယအြားဖွငျ့ ငါးအဆီ 1gမှာ အိုမီဂါသရီးပမာဏ 300mgပါဝငျပါတယျ။
ကနျြးမာရေးအတှကျ omega3ကွှယျဝတဲ့ ငါးအဆီကို တပတျမှာ ၂ကွိမျစားပေးသငျ့ကွောငျး အကွံပွုပါရစေ။
Omega 3ဆိုတာလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆီဓာတ်(essential fatty acid)တမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီတွေထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ အဆီမျိုးဆိုရင်လည်း မမှားဘူး။
omega 3ကို ငါးရဲ့အဆီ(fish oil)ထဲမှာ အဓိကတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာ တချက်ပြောချင်တာက ငါးကြီးဆီ(cod-liver oil)နဲ့ ငါးအဆီ(fish oil)မတူညီပါဘူး။ ငါးကြီးဆီ(cod-liver oil)ဆိုတာ ငါးရဲ့အသည်းကနေ ထုတ်ယူထားတာပါ။
ငါးကြီးဆီမှာ omega 3အပြင် ဗီတာမင် အေနဲ့ဗီတာမင်ဒီဓာတ်တွေလည်းပါဝင်သေးတယ်။ သို့သော် ငါးကြီးဆီ(cod-liver oil)ရဲ့ အိုမီဂါသရီးပါဝင်မှုက ငါးအဆီ(fish oil)ထက် ၂ဆလောက် ပိုမိုနည်းပါးတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အိုမီဂါ သရီးကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာကို ရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ငါးအဆီကို အဓိကစားပေးသင့်ပါတယ်။
Omega 3လို့ ဘာကြောင့် ခေါ်ကြလဲ
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံအရ omega 3ဆိုတာ long-chain fatty acid မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ long-chainဆိုတဲ့သဘောက ကာဗွန်အက်တမ် အနည်းဆုံး ၁၈လုံးပါဝင်တဲ့ မော်လီကျုးတစ်ခုကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ကာဗွန်အက်တမ် ၃လုံးမြောက်မှာ အဆက်နှစ်ခုပါလို့ omega 3လို့ အလွယ်အမည်ပေးထားပါတယ်။ အလားတူ ကာဗွန်အက်တမ် ၆လုံးမြောက်မှာ အဆက်နှစ်ခုရှိရင် omega 6လို့ ခေါ်ပါမယ်။ ၉လုံးမြောက်မှာ ရှိရင် omega 9ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်တီးအက်ဆစ်ဆိုတာ အဆီဓာတ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ fatty acidထဲမှာ ပြည့်ဝဆီ(saturated fatty acid)နဲ့ မပြည့်ဝဆီ(unsaturated fatty acid)ဆိုပြီး ခွဲခြားထားတယ်။ ပြည့်ဝဆီ(ဘဲသား၊အမဲသား၊ဝက်သား)ဆိုတာ မကောင်းတဲ့အဆီမျိုးဖြစ်တယ်။
သာမန်အခန်းအပူချိန်မှာ ခဲနေတဲ့အဆီမျိုးဖြစ်ပြီး သွေးကြောနံရံမှာ ခဲပြီးပိတ်ဆို့စေတာကြောင့် ကောင်းကျိုးမပြုဘူး။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးပြုတာက မပြည့်ဝဆီတွေဖြစ်ပါတယ်။
မပြည့်ဝဆီတွေထဲမှာ monounsaturated fatty acidနဲ့ polyunsaturated fatty acidဆိုပြီး ခွဲထားသေးတယ်။ monounsaturated (အုန်းဆီ၊သံလွင်ဆီ)ဆိုတာ မပြည့်တပြည့် အဆီမျိုးကို ခေါ်ပါတယ်။
ဒီလိုအဆီမျိုးဟာ အခန်းအပူချိန်မှာ အရည်ဖြစ်ပေမယ့် အအေးခံရင် ခဲသွားတတ်ပါတယ်။ polyunsaturated fatဆိုတာ အခန်းအပူချိန်တင်မက အအေးခံရင်လည်း အရည်အဖြစ်က ပြောင်းလဲတာမျိုး မရှိပါဘူး။
omega 3ဆိုတာ polyunsaturated fatမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီထဲမှာ လူတွေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးအဆီတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အိုမီဂါ သရီးမှာ ALA(alpha linolenic acid)၊EPA(Eicosapentaenoic acid)နဲ့ DHA(Docosahexaenoic acid)ဆိုပြီး ၃မျိုး ရှိတယ်။ အခြေခံကျတဲ့ အမျိုးအစားက ALAဖြစ်ပါတယ်။ALAဆိုတာ အပင်၊အစေ့အဆံတွေကရတဲ့ အဆီမျိုးဖြစ်တယ်။
ရောင်ရမ်းခြင်းကို အဓိကသက်သာစေမယ်။ ဆေးပညာမှာ ALAထက်စာရင် EPAနဲ့ DHAက ပိုမိုအသုံးဝင်တာ တွေ့ရတယ်။ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို အဓိကကာကွယ်ပေးပြီးမကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်ကို လျှော့နည်းစေနိုင်တယ်။
ထို့ပြင် DHA က ကလေးဦးနှောက်ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းကိုအားပေးပါတယ်။ EPAနဲ့DHAကို ငါးအမျိုးမျိုး(ဆော်လမွန်၊ဆာဒင်း၊တူနာ)၊ပင်လယ်စာ၊ပင်လယ်ရေမှော် စတာတွေမှာ အဓိကတွေ့ရှိရတယ်။
OMEGA3fatty acids က ဘာတွေ လုပ်ပေးလဲ?
၁။ Cholesterol ကျဆင်းခြင်း
OMEGA3fatty acidsဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မလိုအပ်တဲ့ ပြည့်ဝဆီတွေကို နည်းစေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ HDL Cholesterol တွေကို တက်စေပါတယ်
၂။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ကာကွယ်ခြင်း
OMEGA3fatty acidsဟာ သွေးကြောတွေအဆီဖုံးတာ ကာကွယ်ပေးလို့ နှလုံးသွေးကြောသာမက အခြား သွေးကြောကျဉ်းရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်ပါတယ်
၃။ သွေးတိုး ကာကွယ်ခြင်း
လေ့လာချက်တွေအရတော့ OMEGA3fatty acids တစ်နေ့ ၃ဂရမ် သောက်ပေးရင် သွေးတိုးကာကွယ်ပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ၃ဂရမ်ဆိုတာ များတော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
၄။ အဆစ်ယောင် လေးဘက်နာ Rheumatoid arthritis
့် OMEGA3fatty acidsဟာ အဆစ်ယောင်တာကြောင့် နာကျင်မှုကို သက်သာလျော့နည်းစေတယ်။ အဆစ်ပျက်စီးမှုကိုတော့ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
OMEGA3fatty acidsဟာ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကို မြင့်တက်လာစေလို့ အရိုးသိပ်သည်းဆကိုလည်း မြင့်တက်လာစေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။
အရွယ်မတိုင်ခင် မှတ်ဉာဏ် ကျဆင်းခြင်းကို လေ့လာတဲ့အခါ OMEGA3fatty acids မှီဝဲမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှတ်ဉာဏ် ကောင်းမွန်အောင် ငါးစားကြရအောင်လား။
တယောက်နဲ့ တယောက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ပမာဏ မတူညီကြပါဘူး။ အသက် ၅-၁၄နှစ်အတွင်း 500mg၊အသက် ၄၀အောက် ဖြစ်ရင် 1000mg၊အသက် ၄၀အထက်ဖြစ်ရင် 2000mgအသီးသီးလိုအပ်ပါတယ်။
နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် နေ့စဉ် အိုမီဂါ သရီး ပမာဏ 1 g စားပေးသင့်တယ်။ တပတ် အနည်းဆုံး 2g စားပေးနိုင်ရင် လေဖြတ်နိုင်ချေကို ၅၀ရာခိုင်နှုန်းထိ လျှော့ချပေးတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြည့်စွက်ဆေးထက်
အစားအသောက်ထဲမှာ ပါနေနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ယေဘုယျအားဖြင့် ငါးအဆီ 1gမှာ အိုမီဂါသရီးပမာဏ 300mgပါဝင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် omega3ကြွယ်ဝတဲ့ ငါးအဆီကို တပတ်မှာ ၂ကြိမ်စားပေးသင့်ကြောင်း အကြံပြုပါရစေ။